Mafoni ako ekare anogadziridzwa sei mumatare endarama - AFRIKHEPRI
Mazana emakore mafoni anoshandiswa zvakare mugoridhe bullion
Iko kufananidzira kweruva rerusi
Cmubvunzo wake uri kubvunzwa zvakawedzerwa: zvekuita nemidziyo yekare yemagetsi? Kambani muBelgium yakawana mhinduro: inotora simbi dzinokosha (kunyanya goridhe) iri marara aya. Iyi fekitori iri muHoboken, Belgium, uye inoshandura mbozhanhare dzako kuti dzive goridhe. Iyi nzvimbo yekurapa, yakasarudzika muEurope, inoshandisa zvakare nharembozha nemakomputa akare nekudzorera simbi dzinokosha dzavanadzo.
Zvechokwadi, makadhi emagetsi emarara aya - anobva kuEurope yose - ane kukosha. Mune kadhi rimwe nerimwe rekugadzira michina kune tsvina inogadzirisa iyo inogona kugadzirwa yegoridhe, iyo ndiyo inowanikwa mufekitari ino nekuda kwekuita kwakaoma. Zvimwe simbi zvinogonawo kuvapo seyesirivha, platinum kana palladium (nsimbi isina kuwanikwa yemhuri yeplatinum). Zvose izvi zvishandiso hazvishamisi saka zvinodhura.
Zvechokwadi, kukosha kwesimbi yakakosha mufoni yakaderera uye zvinotora zviuru zvezvigadziri kuwana huwandu hwakawanda hwegoridhe. Semuenzaniso, inowanzochengetedzwa foni ine mitsara ye 50 yezvigadzirwa zvinokosha uye smartphone inenge ine 1 euro. Kugamuchira 1 kg yegoridhe (inenge 40 000 €) inoda 50 000 cell phone.
Kuti adzore zvishandiso izvi, dongo racho rinoputsika, simbi dzisingasviki uye zvinhu zvinosvibisa zvabviswa, uye zvigadziriswa zvigadzirwa zvinosanganiswa muvheni. Zvose izvi zvinoshandiswa pakavanzika nekambani. Pakupedzisira, simbi inokosha yakawanikwa inowanikwa pa 99,9%.
Pakati pemabhiriyoni e10 emafoni anowanikwa pasi pano zvishoma chete anodzokororwa zvakare, kushandiswa kwezvinhu zvemagetsi kunogona kukura zvikuru mumakore anotevera.
Haiti inovaka chipatara chikuru chezuva nezuva chemagetsi
Rega Kuva Nemutsa, Iva Wechokwadi - Thomas D'Ansembourg (Audio)